निर्मलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आशंका, काठमाडौंमा एक र महेन्द्रनगरमा तीन पक्राउ | Diyopost - ओझेलको खबर निर्मलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आशंका, काठमाडौंमा एक र महेन्द्रनगरमा तीन पक्राउ | Diyopost - ओझेलको खबर
निर्मलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको आशंका, काठमाडौंमा एक र महेन्द्रनगरमा तीन पक्राउ
Diyo post बिहिबार, मंसिर २०, २०७५ | ७:३५:२७
काठमाडौं, मंसिर २० । बालिका निर्मला पन्तको सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको हुन सक्छ, प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानले यस्तै संकेत गरेको छ । यही आशंकामा चारजना पक्राउ परेका छन्, एक काठमाडौंमा र तीन महेन्द्रनगरमा ।
सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंकामा निर्मलाका छिमेकी प्रदीप रावल काठमाडौंमा पक्राउ परेका हुन् । उनलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा राखिएको छ । त्यस्तै, अन्य तीनजनालाई महेन्द्रनगरमै पक्राउ गरिएको हो । उनीहरू सबैजना लागुऔषध दुर्व्यसनी रहेको र केहीले अपराध स्वीकार गरेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । तर, डिएनए परीक्षणबाट पुष्टि नभएसम्म औपचारिक विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रहरीले जनाएको छ ।
रानीबारीकै शैलीमा पर्दा खुल्ला निर्मला प्रकरणको ?
रानीबारी हत्याकाण्डको अनुसन्धान १४ वर्षसम्म उपलब्धिहीन थियो । विभिन्न टोली र समिति खटाए पनि प्रहरीले इन्जिनियर दम्पतिको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको थिएन । तर, नाटकीय रुपमा प्रहरीले तीन वर्षअघि दोषीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
सो घटनाका अभियुक्तको सूचना प्रहरीले भट्टीबाटै प्राप्त गरेको थियो । अभियुक्तहरू मनराज गुरुङ र प्रमेश चौहानले एक भट्टीमा आफूहरूले एक दम्पतीको हत्या गरेपनि पैसा नपाएको विषयमा चर्चा गरेका थिए । उनीसँगै त्यहाँ रहेका व्यक्ति पछि ठगीमा मुद्दामा पक्राउ परे । उनले त्यससम्बन्धि विवरण सिआईबीको हिरासतमा खुलाएका थिए । लगत्तै दुवैजना पक्राउ परे । अदालतले पनि उनीहरूलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ ।
३१ असार २०६९ मा इन्जिनियर हेमन्त श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती अञ्जलीको हत्या भएकोमा अभियुक्तहरू १४ वर्षपछि अर्थात् १ चैत २०७१ मा पक्राउ परेका थिए ।
अहिले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्यामा पनि प्रहरीले त्यस्तै ‘क्लु’ भेटाएको छ । तर, हरेक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सार्वजनिक इजलास बस्ने गरेकोले पछिल्लो अनुसन्धानमा पनि प्रहरी आफैँ सर्तक छ । त्यसैले डिएनए परिक्षणको रिपोर्टमै प्रहरीको सफलता निर्भर हुनेछ ।
गत १० साउनमा साथीको घरमा गएकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । घटनाको प्रारम्भिक चरणमा प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरबाही गर्दा अभियुक्त पत्ता नलागेको आरोप लाग्दै आएको छ । महत्वपूर्ण प्रमाण समेत नष्ट गरेकाले प्रहरीप्रति अविश्वास छ । दोषी पत्ता लगाउन माग गर्दै दबाबमूलक आन्दोलन भइरहेको छ ।
बिहिबार, मंसिर २०, २०७५ | ७:३५:२७
हिरासतमा आत्मसमर्पण गरेको भन्दै विप्लव समुहद्वारा नुवाकोटमा…
हिरासतमा आत्मसमर्पण गरेको भन्दै विप्लव समुहद्वारा नुवाकोटमा कार्यकर्तामाथि कारबाही !
…जब दिपक मनाङेले सडकमा बेहोस् युवतीलाई मन्त्रीको गाडीमा राखेर अस्पताल…